हरेक पाइला-पाइलामा झुठ बोल्ने गर्छन् यस राशिका मानिसहरु ! हेर्नुहोस् झुठ बोल्न माहिर रहने राशिहरु ! « 24 news times
यस राशि भएका व्यक्तिहरु एकदम स्पष्ट तरिकाबाट व्यवहार गर्नमा रुची राख्ने गर्छन्। सिधा तरिकाबात हरेक कार्य गर्न रुचाउने यस राशिका व्यक्तिहरुलाई खासै झुठ बोल्नु पर्ने आवस्यकता पनि रहने गर्दैन भने यस राशिका मानिसहरु झुठ माथि सजिलै विश्वास पनि गरिहाल्दैनन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु जिद्दी प्रकृतिक हुने गर्छन्। आफलाई मन परेको हरेक चिज पाउनको लागि धेरै लालायित समेत रहने भएका कारण सानो-तिनो झुठ भने बोल्ने गर्छन्। तर ठुलै झुठ बोल्न भने डराउने समेत गर्छन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु आकर्षणमा रहने चाहने हुन्छन्। साथै अअरुको नजरमा आफु उत्कृष्ठ रहनु पर्ने भएका कारण धेरै झुठ बोल्ने गर्छन्। सोच स्थिर रहने भएका कारण आफ्नो रुची समेत बदल्ने गर्छन्। पाइला-पाइलामा झुठ बोले पनि खासै नपत्याउने झुठ भने बोल्दैनन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु धेरैनै ईमानदार रहने गर्छन्। साथै अरुले के सोच्छन् भन्ने कुरामा समेत चिन्तित रहने गर्छन्। आफ्नो लागि नभई अरुको फाइदाको लागि भने थोरै मात्रामा झुठ बोल्न सक्ने यस राशिका मानिसहरु आफ्नो लागि भने खासै झुठ बोल्दैनन्।
यस राशि भएका मानिसहरु मानिसहरुको बिचमा आफ्नो प्रस्तुति साथै उपस्थिति बलियो रहोस् भन्ने चाहने राख्ने गर्छन्। धेरै चतुर रहने भएका कारण यस राशिका मानिसहरुको झुठ पनि धेरै सत्य जस्तो देखिन्छ। झुठ बोल्ने काममा धेरै माहिर हुने गर्छन् यस राशिका मानिसहरु।
यस राशि भएका व्यक्तिहरुलाई झुठ बोल्ने कार्य मन नपर्ने हुन्छ। जसका कारण धेरै अवस्थाहरुमा झुठ बोल्दै-बोल्दैनन्। धेरै अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि धेरै सोचेर मात्रै झुठ बोल्ने यस राशिको बानि रहेको हुन्छ। सानो तिनो समस्याको लागि भने कहिले पनि झुठ बोल्ने गर्दैनन्।
यस राशि भएका मानिसहरु धेरै जस्तो कूटनीतिक रहने गर्छन् भने हरेक समस्याको हाल कूटनीतिक तरिकाबाट सुल्झाउने गर्छन्। यदि कुनै पनि परिस्थितिमा फसेको अवस्थामा झुठ बोल्न खासै पछि नहट्ने यस राशिका मानिसहरु झुठ लुकाउन समेत खप्पिस रहेका हुन्छन्।
यस राशि भएका व्यक्तिहरु झुठ बोल्ने कार्यमा धेरैनै अगाडी रहेका हुन्छन्। हरेक परिस्थितिमा झुठ बोल्ने यस राशिका मानिसहरुको झुठ पक्राउ भएता पनि लाज नमान्ने गर्छन्। झुठ धेरै बोल्ने भएका कारण केहि न केहि झुठ भने यस राशि भएका व्यक्तिहरुको पत्ता लाग्ने गर्छ।
यस राशि भएका मानिसहरु झुठ बोल्ने कार्यको जहिले पनि विरुद्ध रहने गर्छन्। सकेसम्म झुठ बोल्ने अवस्थामा पनि आनाकानी गर्ने यस राशिका मानिसहरु आफ्नो आफन्त साथै साथीको लागि भने सम्भव भएसम्म धेरै सानो साथै सामान्य झुठ भने बोल्न सक्छन्।
यस राशि भएका मानिसहरु झुठ बोल्ने कार्यलाई धेरैनै घृणा गर्ने गर्छन्। केहि कुरा मन नपरेमा अगाडीनै भन्ने बानि भएका कारण यस राशिका व्यक्तिहरु आफ्नो गल्तिलाई पनि सजिलै आत्मसाथ गर्ने गर्छन्। जसका कारण यस राशि भएका मानिसहरु झुठ बोल्ने कार्य देखि टाढानै रहने गर्छन्।
यस राशि भएका मानिसहरु खुशमिजास रहने गर्छन्। आफ्नै तरिकाबाट रमाउने यस राशिका मानिसहरु ठट्टा गर्न पनि सिपालु रहने गर्छन्। कहानी बनाउनमा पनि यस राशि भएका मानिसहरु माहिर रहने गर्छन्। जसका कारण यस राशि भएका व्यक्तिहरुलाई झुठ बोल्न धेरै सजिलो लाग्ने गर्छ। आफ्नो मतलबको लागि जुनै पनि हदसम्मको झुठ बोल्ने यस राशिका बानि रहेको छ।
यस राशिका मानिसहरु धेरैनै कम झुठ बोल्ने गर्छन्। यस राशिका व्यक्तिहरु झुठ बोल्ने कार्य देखि डराउने समेत गर्छन्। तर धेरनै संवेदनशील रहने भएका कारण यस राशिका मानिसहरु अरुको भलाइको लागि भने सानो-तिनो झुठ भने बोल्न सक्छन्।